博客Aha Echiche：AtụmatụIjiHọrọ祖鲁okèAha N'ihi nagịBlog
Kedu ihe mgbagwojukachasịna bloggerọbụlana-eche?
Ịkpọblog nwereikeịbụihe siri ezigbo ike，karịsịamaọbụrụnaịbụonyeọhụrụmakaịdeblọgụnaịkọihe。 Maọbụrụnaịdịka m，nikere ike ijiọtụtụawana-atụgharịuche maka aha，naanịijimejupụtandepụtanke crappy.
N’ezie，e nwereụzọka mma?
Ọfọn，obidịmụtọnaịjụrụ！ Ọbụrụnaịbụụdịkpọrọasịna-eme aha maọbụnaọbụihedịegwu na ya，abịawomụfọdụatụmatụna usoro iji nyeregịakaịmepụtamawepịtaaha zuru oke.
1 ND＃MỌD＃1：Ghọtaotu ahagịsina-anọchiteikagịna博客
2 Ntuziaka＃2：Nwee词库dịnjikere ma nweta ihe okike!
3 Ntuziaka＃3：Jiri名词，动词，Ok Ok Ok Ok Na Na Na Ban Banịaya aya aya
3.1 Ntụleọkwankeọkwa：Iji OkwuemepụtaramaọbụỊchọtaOkwu nkeGị
4 Ntuziaka＃4：Mgbe niile na-ada，Jiri Blog Aha / Okwu Generator
5 ỊchọtaAha Aha ZuruOkè
Tupuanyịarịgooiwepụahandịna-ede ahanchịkọta，ọdmkpaiwepụoge maghọtaihe blog na aha ahagịna-anọchiteanya ya.
Keduụdịụda（ụda，ihe siri ike，wdg）ga ga-abụ?
Kedu ka aha aha blog ga-esi nyeregịakaịmepụtaikagị?
Aha博客gịkwesịrịkịnaụdịịdịnayaịna-eme。 ya na blog blog blog blog ak "美食家角" maọdịnayagịbụmakaịtụleihe gbasara ntutu isi makaụmụnwoke，嘎-eme kandịna-agụgụihe na –
N’otu akaahụ，ọbụrụnaịnwere ahaụlọọrụ/ nkedịjụụma dee ya n’oluụdaolu，ọna-enye onyena-agụya ihena-ezighịezi weehapụha ka ha eche mahàkwesịr ijigịkpọrọihe maọbụna ha haekwesịghị.
Na-agbanwe agbanwe na ikagịna iheọna-anọchiteanya ya!
litebliterụnaịchọrọmalite博客nri，ga-eji okwundịmetụtaranri maọbụiri nri（yabụ，零食，纯素食，健康，排骨，wdg）.
blogbụrụna bloggịbanyere usoroazụmahịa，, na-eji isiokwundịmetụtaraụlọọrụndịahụmaọbụjiri okwunkwekọrịta（dịkaSEO，ahịadijitalụ，SEM wdg）.
Ntuziaka＃2：Nwee词库dịnjikere ma nweta ihe okike!
N’oge a，ga-enwe echiche nke okwundịkachasịmmaịkọwapụtarana bloggị。哎呀，na！ Buru aisaurus，ma obu buru ibu thesaurus.com，na lelee okwundịyiri ya nke a nwere ike iji maka aha博客gị.
Kaanyịkwuo naịna-emeblọọgụnri。 ike NụụN N N N N N N N N N N N N N N i N iri N N N N N N N N N N N N N N.
Tinye okwundịahụn’ime thesaurus.com na ga-enweta okwundịdịka nri，nri，ọhụụ，mma，ọṅụ，goodies，nri，孟买，ike，obi，蔬菜，na obiụt,。 Tinyeụfọdụokwundịahụọnụ（dịka vegan munchies or Kwado nri nri）na voila，ịnwere aha maka bloggị.
Mgbeịnọgidesiriike na-eche echiche maka okwu iji ahagịBlog，ịnikere ike iji thesaurus mee ihe ngwa ngwa makandepụtaokwu.
Ntuziaka＃3：Jiri名词，动词，Ok Ok Ok Ok Na Na Na Ban Banịaya aya aya
we we uru uru uru uru uru uru uru uru uru ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma，，，，.
Ntinye ederede，动词，不喜欢，不喜欢，不喜欢，不喜欢，不喜欢。 Ọzọ，ọna-enyere aka izere iji ihentanetụnasaịtịmaọbụblọọgụndịọzọyiri nkegị.
网站nanchịkọtaihe oriri，博客作者，nke nwere ikeịbụ：onyeisi，nwaokorobịa，nriagbtọ，onye mbido，nye mbido，nke ，nri ehihie，ụlọrrụ，wdg
Debe haọnụna ga ga-enweta ihe bara nnukwu uru dịka nriụmụakakwesịrịekwesị，素食主义者老板吃午饭，ntụọkakichinọhụrụ，maọbụụlọoriri na-edoziahụ.
我喜欢yime ya kaọgbakwunye ma gbakwunye ihe ngwa ngwa maọbwu okwudịgasịicheiche iche kaọbụrụihepụrụiche。 ụfọdụiheatụga-abụ：ntụziakanwaagbọghọkwesịrịekwesị，na-eri nri nri n’oge nri，ndịna-aṅụrịọṅụ，dịmma madịhụrụ.
Ntụleọkwankeọkwa：Iji OkwuemepụtaramaọbụỊchọtaOkwu nkeGị
Makandịnweremmasị，ịnikere ike wanwaleịmepụtamaọbụmepụtaokwuọhụrụọbụlaịga-akpọahagịna bloggị.
Nke anaọachntakịrịihe na-eche echichena-abụghịnke na-eche echiche ma rebụrụna ime-elu nikereikeịghọụzọdịegwu iji gbakwunye egwu na aha ahagị。 Ufodu i omuma atu bu快餐店，ihe ndi ozo，sizzlerella，ahuike.
Atụlaegwuịnwaleụdịokwuọbụlama nwee obiụtọna ya。 ike imeri ahadịmma nkeọna-adịghịonyeọbụlachere!
Ntuziaka＃4：Mgbe niile na-ada，Jiri Blog Aha / Okwu Generator
Maeleghịanya，ịgbalịrileisi ihe niiledịn’elu maịkana-enweghịikeịbịaraahaọma。 Enweghịnchekasị！ Gbalịajiri aha / okwungwaọrụmakaụfọdụarodịukwuu.
单词单词单词单词单词单词wordroid.com Naanịtinye okwu nkemetụtaraọdịnayagị，pịabọtịnụ "词义", ike ga-enyegịndepụtaahandịịnwere ike iji.
Ihedịukwuu banyere Wordroidsbụnaịnwere ikeịtọókègịna okwugị，kọwaaàgwànke okwuahụ，setịpụkpụrụya，naọbụnagụnyerengalaba aha nnweta。 Nke apụtaranaịnwereikeịchọpụtama ahaịchọrọịdenyereaha na .com maọbụnaọbụghị，na-ewepụtacheekasịnkeịmepụtaihedịegwu machọpụtana e are ya.
ỊchọtaAha Aha ZuruOkè
E nwereọtụtụzọịga-esi dee blog nan’ikpeazụ，ọbụgịkaịga-ekpebi iheọbụ.
Ka o sinadị，ịmepụtaahaagaghịabụusoro ihe omimi。 Nwee obiụtọma soro ya mee ihe nandịgụrụgịga-ahụnkeahụ.
切塔（Cheta），英国人（Ita Ndi siri ike mgbe abia ime aha）。 Ọbụrụhaalanaịhụnaọna-ejikọtaọdịnayagị，ịnwere ikeịbụihe okikedịkaịchọrọ!
Ozugboịnwetara nkeahụn’ụzọdebanye ahagịBlog ngalaba，ịna-elekwasịanya n’ihendịka mkpadịka ede ederede epic na eto eto gi.